Waraysi ku Saabsan Barashadda Cilmiga Bulshadda (dhegayso) – Radio Daljir
Waraysi ku Saabsan Barashadda Cilmiga Bulshadda (dhegayso)
Oktoobar 11, 2017 11:57 b 0
Waxbarashada guud ahaan waxaa ka mid ah maadada la yiraahdo Cilmiga Bulshada (Civic Education) oo laga dhigo goobaha waxbarashada , waxaana inta badan ay mid tahay maadada ugu muhiimsan ee manhajka waxbarashada.
Haddaba Waa maxay macnaha guud ee Cilmiga Bulshada ama Civic Education? Maxayse tahay kaalinta ay ka qaadato horumarinta barashada xuquuqda waajibaadka iyo waajibaadka muwaadintka? Cilmiga Bulshada kaalin ma ku leeyahay barashada qaabka ama habka ay dawladda u shaqayso?
Su,aalahaas iyo kuwo kaleba waxaan hordhignay Agaasimaha wasaarada waxbarashada ee Puntland Maxamed Cabdiqaadir.